MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-06-30
at 7/06/2013 10:43:00 PM No comments:
ကေအိုင်အို ကိုယ်စားပြု Technical Advisory Team အလုပ်အဖွဲ့ရုံးကို မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူရပ်ကွက် နောင်ရာနယ်မြေ ကေအိုင်အို ဆက်ဆံရေးရုံးဟောင်း နေရာတွင် လာမည့် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းရုံးဖွင့်ပွဲကို ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ၊ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ (MPC) ၊ လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ (NGOs)၊ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖိတ်ကြားဖွင့်လှစ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ကို ရောက်ရှိနေသည့် ယင်းအလုပ်အဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဒေါင်ခေါင်းက ဆိုသည်။
at 7/06/2013 09:42:00 AM No comments:
at 7/06/2013 09:41:00 AM No comments:
at 7/05/2013 08:19:00 PM No comments:
၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) နှင့် ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေး ကော်မ တီ ဒုတိယ ဥက္ကဌ (၃) ဦးသိန်းဇော် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည့် ပွဲကို ရက်ရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း UWSA ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအောင်မြင့်က ပြောသည်။
အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် UWSA တပ်များအကြား လက်ရှိစစ်ရေးတင်းမာနေသော အခြေအနေ ပြေလည်ရေးအပါအဝင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စ အချို့ ဆွေးနွေး ကြရန် ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ယနေ့စီစဉ်ထားသော်လည်း UWSA ဘက်က “လိုအပ်ချက်အချို့” ရှိနေသည့်အတွက် ယင်းသို့ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
at 7/05/2013 08:18:00 PM No comments:
ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) သည် အစိုးရနှင့်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုများ တွင် ကချင်လူထု လိုလားသော သီးသန့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် (Absolute Sovereignty Power) နှင့်ပတ် သက်၍ ဆွေးနွေးမှု မရှိသောကြောင့် ၄င်းကိစ္စ ကို ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်ပ အခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNO က ထောက်ပြ လိုက်သည်။
at 7/05/2013 06:55:00 PM No comments:
at 7/05/2013 06:53:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်တောင် ပိုင်း တာချီလိတ် ခရိုင်မိုင်းတုံမြို့နယ် တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ဝပြည်သွေး စည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA နှင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ တို့၏ တင်းမာမှုကို လာမည့် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မည်ဖြစ်ကြောင်း UWSA ဘက်က အကြောင်းပြန်ထား သည်ဟု ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးကို ကိုး ကားပြီး တရုတ်ပြည်နယ်စပ် အခြေစိုက် စစ်ရေး အကဲခတ် ဦးအောင်ကျော်ဇော်က ဆိုပါသည်။
“ UWSA ဘက်က ဒုတိယ ဥက္ကဌဦးရှောင်းမီလျံ ဦးဆောင်မယ်။ အစိုးရ ဘက်ကတော့ ဦးသိန်းဇော် ဦးဆောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အစိုးရတြိဂံတိုင်း ဌာနချုပ် ကျိုင်းတုံမြို့မှာတွေ့မယ်။ တွေမယ့် ရက်ကတော့ အစိုးရဖက်က မနက်ဖြန် ဇူလိုင် (၆) ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံဖို့ တောင်းဆိုထားပေမဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာမှတွေ့ဆုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ UWSA ကဒီနေ့အကြောင်းပြန်ထားပါတယ် ” ဟု UWSA အဖွဲ့အတွင်း၌နှစ်ပေါင်း၂၀ခန့်ပါဝင်လာခဲ့ပြီးနယ်စပ် တစ်လျှောက် တွင် စစ်ရေးလေ့လာခဲ့သူ ဦးအောင်ကျော်ဇော်က ဆိုပါသည်။
at 7/05/2013 06:52:00 PM No comments:
at 7/05/2013 04:24:00 PM No comments:
at 7/05/2013 03:10:00 PM No comments:
ဒီ ကွမ်မန့်မှာတော့ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားတွေကို စည်းလုံးရေး စကား ပြောနေတာက ကရင်တိုင်းရင်းသား ဖြစ်နေတယ်။ (အမေရိကန် မှာ ဆိုရင်တော့ ဥပဒေ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။)
at 7/05/2013 02:55:00 PM No comments:
အမျိုးဘာသာ၊သာသနာ လှုပ်ရှားမှု ကြောင့် ဘယ်သူတွေ ဘာအကျိုးရှိမလဲတော့ မသိသေးဘူး.. လောလောဆယ်တော့
(၁) ခရစ်ယာန် တိုင်းရင်းသား နဲ့ ဗုဒ္ဓတိုင်းရင်းသားတွေကြား အမြင်မတူမှုတွေ ရှိလာတယ်။
at 7/05/2013 02:53:00 PM No comments:
'၀' ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး ပါတီအနေဖြင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တွေ့ဆုံရန် ကမ်းလှမ်းထားခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော တင်းမာမှုများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း UWSA ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအောင်မြင့်က ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် The Daily Eleven သို့ ပြောကြားသည်။
''အခုအခြေအနေကတော့ ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လောက် ကြာလာတဲ့အခါကျတော့ အခြေအနေတွေ နည်းနည်း ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ သဘောပါ'' ဟု ဦးအောင်မြင့်က ပြောကြားသည်။
''တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ပြောကြားထားတာ မရှိပါဘူး'' ဟု ဦးအောင်မြင့်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
at 7/05/2013 08:49:00 AM No comments:
at 7/04/2013 11:38:00 PM 1 comment:
at 7/04/2013 05:29:00 PM No comments:
စစ်ရှောင်နေစဉ် ၂ နှစ်ကာလအတွင်း ခိုလှုံနေကြသော ဒုက္ခသည်များ၏ ယာယီအိမ်များ ပျက်စီးလာသောကြောင့် အိမ်သစ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင် ဆောက်လုပ်ပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဒုက္ခသည်မိသားစုများနေထိုင်သည့် ယာယီဆောက်ထားသောတဲအိမ်များ ပျက်စီးယိုယွင်းလာခြင်းကြောင့် အလှူရှင်များကို မျှော်လင့်နေကြောင်း ဒုက္ခသည်ဖြစ်သူ ဒေါ်လွမ်းနော ကပြောသည်။
“စစ်ပြေးလာတာ ၂ နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဆိုတော့၊ အခုနေတဲ့ယာယီအိမ် အားလုံးကမကောင်း တော့ဘူး၊ အဲဒီအတွက်ကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း သတိထားမိစေချင်တယ်” ဟုဆိုသည်။
at 7/04/2013 05:20:00 PM No comments:
ကချင်နယ်မြေတွင် တိုက်ပွဲများ၊ စစ်ဆင်ရေးများ ငြိမ်သက် လာနေသဖြင့် ဤသည် မြစ်ကြီးနား တွေ့ဆုံပွဲ၏ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု ရလာဒ်အဖြစ် ရှုမြင်နေကြကြောင်း၊ KIO ၏သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘိုက ဆိုပါသည်။
“မြစ်ကြီးနား တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်မဖြစ်တော့ဘူး။ ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွှန်တော်တို့မှာ ရှိတဲ့ တပ်မဟာ (၅) ခု စလုံးမှာ တိုက်ပွဲတွေ မရှိတော့ဘူး” ဟု ဆိုပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ကချင်နယ်မြေတွင် ဖြစ်ပွားမှု မရှိခဲ့သော်လည်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၌ ရှိသော တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေတွင် ဇွန်လ ကုန်ပိုင်း အထိ နှစ်ဖက် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါသည်။ ဤအခြေအနေသည်လည်း KIO ၏ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးသည့်နောက် ပြန်လည် ငြိမ်သက်သွားသည်ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘိုက ဆိုခဲ့ပါသည်။
at 7/04/2013 04:07:00 PM No comments:
at 7/04/2013 01:59:00 PM 1 comment:
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း စာချုပ်နှင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသော ဒေသခံများ အနာဂတ်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းမှုကို လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဒု-ဝန်ကြီး၏ ပြန်လည်ဖြေကြားချက်မှာ
ပြည့်စုံလုံလောက်မှု မရှိကြောင်း မေးခွန်းရှင် ဒေါ်ဒွဲဘူ က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
at 7/04/2013 01:58:00 PM No comments:
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး (ကစထမှူး) ဆိုတာကို တပ်မတော်မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာတော့ ကြာပါပြီ။ ဦးနေဝင်း လက်ထက်ကတည်းက ကစထ (၁/၂) ရယ်ဆိုပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ကာလကတည်းက စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစဉ်က ကစထ (၁/၂) မှူး အရင်ဦးဆုံး ဖြစ်လာသူတွေကတော့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်စိန်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းရီတို့ဘဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်အောင်နှင့် ချစ်ဆွေတို့ ဖြစ်လာကာ နဝတ တက်လာတော့ ကရင်ပြည်နယ် KNU ရဲ့ အမာခံ စခန်းများအား တိုက်ဖို့ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်လှကို အထူး စစ်ဆင်ရေး အဖွဲ့မှူးလို့ တပ်ချုပ်က အာဏာကုန် လွှဲအပ် တာဝန်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ သူက အမြောက်တပ် အပါအဝင် (ရေ/လေ) တပ်များကို ခေါ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ တပ်မတော်သားများ စခန်းသိမ်းလို့ရရင် တိုက်ပွဲမှာ ထူးချွန်ရင် ရှေ့တန်းမှာ Field Promotion (Jump Promotion) လုပ်ပေးပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
at 7/04/2013 01:35:00 PM No comments:
at 7/04/2013 01:25:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ရှမ်းမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စီးပွားရေးစတဲ့ အရေးကိစ္စတွေ အားလုံးအတွက် တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပြောဆိုနိုင်ဖို့ အတွက် ဒီကနေ့ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ဝန်းသိုကျောင်းတိုက် မှာ ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးပါတဲ့ ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီလို ဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲ့ဒီကော်မတီမှာပါဝင်တဲ့ တာလောကြီးကျေးရွာက ဦးစန်းဝေက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
at 7/04/2013 01:21:00 PM 1 comment:
at 7/03/2013 11:27:00 PM No comments:
Ndai ten hta Myen asuya gaw rawt malan hpung ni yawng hpe shamyit kau lu na matu shanhte lu ai hpaji hte n-gun atsam ma hkra lang nna nji nmu shakut nga ai ten rai malu ai. Byin pru wa na mahtai gaw shanhteahkum hpe yihku shatai la nna hpang jahtum na yihkuawan hkru ai LACHYUM de gale wa na masa nga ai.
at 7/03/2013 08:57:00 PM No comments:
Kachin Land FB
Is it time to reveal the full transcripts of the 1994 ceasefire agreement between State Law and Order Restoration Council (SLORC) and the Kachin Independence Organization? If you think this is the right time to reveal to the public please give us your comment here.
The KIO's technical team have arrived in Myitkyina today for reopening of liaison office. Are the Kachin people ready to engage with the Burmese government regardless they cannot be trusted?
at 7/03/2013 07:18:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာ လတ်တလော စစ်ရေး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အစိုးရတပ်နဲ့ ၀ တပ်ဖွဲ့တို့ အကြား ပြေလည်မှုရစေဖို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးမယ်လို့ ယူဒဗလျူအက်စ်အေ ၀ တပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းတုံမြို့နယ် နားယောင်းရွာ မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်အတွင်း အစိုးရတပ်ဘက်က ၀ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဆန်သယ်တဲ့ခါ ယူနီဖောင်းမ၀တ်ရ၊ လက်နက်မကိုင်ရ စတဲ့ အချက်တွေ ထိန်းချုပ်တယ်လို့ ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် (ယူဒဗလျူအက်စ်အေ) တရားရေးဌာန ရုံးတာဝန်ခံ ဦးအိုက်လူက ပြောပါတယ်။
at 7/03/2013 07:08:00 PM No comments:
at 7/03/2013 06:59:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား-ဖားကန့်ကားလမ်းမ တလျှောက် လုံခြုံရေးယူလိုက်သော အစိုးရတပ်များသည် ဂိတ် ၁၀ ခုထက်မနည်း ထားရှိကာ ဖြတ်သန်းသူများထံမှ ငွေကောက်ခံနေကြောင်းသိရသည်။
ဖားကန့်မြို့တွင် အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) ကြား တင်းမာမှုလျှော့ကျလာသည့် မတ်လနှောင်းပိုင်းမှစ၍ ခရီးသည်ဖြတ်သန်းမှုများ စတင်စည်ကားလာခြင်းဖြစ်ရာ ယခုချိန်တွင်မူ ဂိတ်များတိုးချဲ့ကာ ငွေကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြစ်ကြီးနားမှ ခရီးသည်တဦးပြောသည်။
at 7/03/2013 04:44:00 PM No comments:
“ တာချီလိတ်နဲ့ကျိုင်းတုံမှာ ရှိတဲ့ ဆက်ဆက်ရေးရုံးတွေကိုပိတ်လိုက်ရပြီး။ ၀တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကိုဆက်သွယ် ထားတဲ့ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းကိုလည်း ဖြတ်တောက် လိုက်သလို UWSA အဖွဲ့ကိုပါ အစိုးရဘက်ကဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်” ဟု ဦးအောင်ကျော်ဇော်က ဆိုပါသည်။
at 7/03/2013 04:23:00 PM No comments:
Ven Ravika FB စာမျက်နှာမှ
ဝကို တိုက်လို့ ရှမ်းတွေ ဝမ်းမသာမိဖို့ လိုပါတယ်။
ကရင်ကို တိုက်လို့ မွန်တွေ ဝမ်းမသာမိဖို့ လိုပါတယ်။
ကချင်ကို တိုက်လို့ ပလောင်တွေ ဝမ်းမသာမိဖို့ လိုပါတယ်။
ဝတွေ မရှိရင် ရှမ်းတွေ မလွယ်သလို ကရင်တွေ မရှိရင်လည်း မွန်တွေ မလွယ်ပါ။ ကချင်နဲ့ရှမ်း မရှိရင်တော့ ပလောင်တွေလည်း ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲ။
မြန်မာ့တပ်မတော်က လက်နက်တပ်ဆင်နေပါတယ်။ တပ်ရင်းတပ်မများကိုလည်း တိုင်းရင်းသားနယ်မြေထဲမှာ ဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသကို လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း သိနိုင်သလို သူတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒုက္ခရောက်ရဖို့ ရှိပါတယ်။ အစိုးရခင်းကျင်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ယုံကြည်မိရင် ဒီချုပ်လိုပဲ ခြေကျွံမိမှာ အမှန်အကန်ပါပဲ။
at 7/03/2013 03:34:00 PM No comments:
at 7/03/2013 01:24:00 PM No comments:
2013 July (2) ya hkying (2:00)pm aten hta Du Kaba Gawlu La Awng woi awn ai K.I.OaMachyoi Hpung Rap Daw (Technical Advisory Team) ni marai (12) gaw Laiza kaw nna Myitkyina de rawt sai lam chye lu ai.
May 28 kaw nna 30 ya shani du hkra myithkrum bawngban da ai hte maren Technical Team hpe Myitkyina kaw hpaw sa wa lu na matu sa du ai re lam chye lu ai.
at 7/03/2013 01:23:00 PM No comments:
at 7/03/2013 09:54:00 AM No comments:
at 7/02/2013 10:14:00 PM 1 comment:
at 7/02/2013 07:52:00 PM No comments:
ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO ၏ နည်းပညာ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့(Technical Team) ရုံးတာဝန်ခံနှင့် အဖွဲ့ဝင် များသည် ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီ အချိန်တွင် ကချင် ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား မြို့သို့ ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်ကြောင်း ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင် ဦးလမိုင်ခွန်ဂျာ က ဆိုပါသည်။
“သူတို့တတွေ ကတော့ KIO ဘက်က အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်မည့် ရုံးတာဝန်ခံ အဖွဲ့တွေ ဖြစ်တယ်။ ရုံးဖွင့်ဖို့ လာတာ ဖြစ်တယ်” ဟု ဦးလမိုင်ခွန်ဂျာ ကဆိုပါသည်။
at 7/02/2013 07:51:00 PM No comments:
at 7/02/2013 07:50:00 PM No comments:
at 7/02/2013 07:49:00 PM No comments:
၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်ပြီး အာလန်ဘွမ်(Alen Bum)တွင် ကေအိုင်အို မှဖွင့်လှစ်ထားသည့် စစ်ရှောင်တိမ်း ကလေးများ၏ ကျောင်းတွင် ဖတ်စာအုပ်၊ အစားအသောက်၊ အ၀တ်အစားနှင့် သောက်သုံးရေ စသည့် အခက်အခဲများရှိ နေကြောင်း သိရသည်။
“မိဘတွေလည်းအားလုံးက စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဆိုတော့ မထောက်ပံ့နိုင်တော့ ကျောင်းသားတွေက အ၀တ်အစားတွေ အစားအသောက်တွေက အစ အဆင်မပြေတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။အခုလက်ရှိ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာက ဖတ်စာအုပ်တွေပါ။ တချို့အခန်းတွေမှာ ဖတ်စာအုပ် တစ်အုပ်မှ မရှိတော့ စာသင်ရာမှ ထိရောက်မှုနည်းပါးတယ်”ဟု ကျောင်းအုပ် ဦးခေါင်လွမ်းကဆိုသည်။
at 7/02/2013 04:28:00 PM No comments:
ကေအိုင်အို ဆွေးနွေး ပွဲကော်မတီနှင့် ကချင်လူငယ်များတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မေ ၂၄၊ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက် ကေအိုင်အို မူးယစ်ဆေးဝါပပြောက် တိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီ ဒုတာဝန်ခံဗိုလမှူးချုပ်ဇောင်းဗုခ်ထန်း နှင့် Kachinwaves media တွေ့ဆုံမေးမြန်ခဲ့သည်ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Kachinwaves။။။ ပထမဦးဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါးကျင်းပတယ်လို့ သိရတယ်။ဘာကြောင့် ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီး ကျင်းပရတာလဲ။
at 7/02/2013 04:26:00 PM No comments:
သူရဦးရွှေမန်း ၏ တောင်း ဆိုမှုကြောင့် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ (ကာလုံ) အစည်းအဝေးကို ယမန်နေ့ မနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့စဉ် သူရ ဦးရွှေမန်းက ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်သည်ဟု သတိပေး ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယနေ့ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်း အဝေးတွင် သူရဦးရွှေမန်းက ယမန်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော ကာလုံ အစည်းအဝေး အခြေအနေကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအား ပြန်လည် ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကာလုံ အစည်း အဝေးသည် ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံအတွက် အောင်မြင်သာ အစည်းအဝေး တခုဖြစ်သည်ဟုလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
at 7/02/2013 04:02:00 PM No comments:
at 7/02/2013 03:54:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dingdung Ginwang Ginjaw Masat (1) Dap Ba Daju Majoi Gawk Nu hta Wunli la kyu hpyi hpawng lamang hpe July (1) ya jahpawt hkying (7:00 - 8:00 AM) hta galaw galaw lai wa sai lam chye lu ai. Kyu hpyi hpawng hta Shut hpyit mara hpyi nem ai lam, KIO Ginjaw Komitiamatu, Hpyen Koi yen tsin yam hkrum nga ai sai daw sai chyen niamatu,shawng lam de shakut shaja nga ai myit rum share niamatu, Amyu Sha yawng myit mada ai pan dung de du wa lu na matu, KIO hpe lam amyu myu hku madi shadaw nga ai ni yawngamatu ni hpe Karai Kasang hpang de akyu ara hpyi wunli la sai lam na chye lu ai.
at 7/02/2013 01:59:00 PM No comments:
at 7/02/2013 01:57:00 PM No comments:
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေ ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်) KIA ပြည်သူ့စစ် (MHH) တပ်ခွဲ(၅) နယ်မြေသို့ အစိုးရတပ်များဝင်ရောက်နေသောကြောင့် နှစ်ဖက်တပ်ကြား စစ်ရေးတင်းမာနေကြောင်း သိရသည်။
အရပ်ဝတ်ဖြင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့များသည် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ၁၀၅ မိုင် ရှမ်းရွာ တိန့်ယန်း (Ting Yang) မှ ဗင်ကား ၄ စင်းနှင့် ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်) စခန်းသို့ စစ်အင်အားသစ်များ ဖြည့်ထားခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာ အစိုးရစစ်သားများကို ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်)မြို့ ပတ်ဝန်းကျင် မော်တော (Maw Taw) ရွာတွင် အင်အား ၃၀ ကျော်နှင့် ဟူဖဲ (Hu Hpye) ရှမ်းရွာတွင် အင်အား ၇၀ ကျော် ချထားကြောင်း MHH တပ်ခွဲမှူး ဇော်ဆိုင်း KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
at 7/02/2013 01:44:00 PM No comments:
at 7/01/2013 09:24:00 PM No comments:
at 7/01/2013 08:49:00 PM No comments:
at 7/01/2013 08:23:00 PM No comments:
at 7/01/2013 08:03:00 PM No comments:
at 7/01/2013 07:22:00 PM No comments:
Laknak lang Rawt Malan taw nga ai Bawsang ni ma hkraantsaemyen asuyaashamu shamawt ai ladat masing hpe maram yu yang, Jet ai Munghpawm (federal) de sa ai hkrunlam hte Awmdawm de sa ai hkrunlam gaw maren sha rai na masa nga ai. Kaja wa hkrak teng sha tsun ga nga yang, Jet ai Munghpawm (Federal) hpe hpyi shawn taw nga ai gaw mungmasa manghkang hpe majan hte nhparan ai sha ku (saboi) ntsa kaw jawm hparan la na matu re. Raitim myen asuya gaw mungmasa manghkang hpe hpyen masa hte shawng dip gamyat tawn lu ai kata kaw she mungmasa jahta mayu ai.
at 7/01/2013 04:39:00 PM No comments:
at 7/01/2013 04:38:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံက ၉၆၉ လို့အမည်ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက် လှုပ်ရှားမှု ဟာ အောက်ခြေ လူတန်းစား
ရဲ့ ယုံကြည်မှုဖြစ် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှား မှုရဲ့ ထင်ရှား တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဦးဝီရသူဟာ စစ်အစိုးရ လက်ထက်က မွတ်စလင် ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက် မှုကြောင့် ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခံရ သူဖြစ်ပြီး သူ့ကိုယ် သူ “ဗမာဘင်လာဒင်” လို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။
at 7/01/2013 04:25:00 PM No comments:
at 6/30/2013 11:07:00 PM No comments:
at 6/30/2013 10:46:00 PM No comments:
at 6/30/2013 05:22:00 PM No comments:
at 6/30/2013 05:20:00 PM No comments: